Sida loo helo xogta kadib shilkii Windows 10 - TELES RELAY
ACCUEIL » QODOBO • Featured • TECH & TELECOM Sida loo helo xogta kadib shilkii Windows 10
Sida loo helo xogta kadib shilkii Windows 10
Ma heli kartid xogtaada ama aad si fudud u lumisay ka dib markii Windows 10 burburtay? Ha welwelin! Maqaalkani, waxaan ku tusi doonaa sida loo soo celiyo xogtaada lumay Windows 10 oo leh nambarka dib u soo kabashada xogta. Khadadka soo socda ayaa ku siinaya tabobar talaabo tallaabo ah oo ku saabsan dib u soo celinta xogta laga helay Windows 10.
Windows 10 ma baqo mar dambe, sida loo soo celiyo faylasha?
"Windows 10 si lama filaan ah ayaa burburay, burburay, oo joojiyay shaqada. Waxaan isku dayay wax walba si aan u xalliyo dhibaatada, laakiin aan ku guuleysan. Hadda, waxaan qorsheynayaa inaan laptop u soo diro dukaanka dayactirka, laakiin ka hor, waxaan rabaa in aan soo kabsado faylashadayda. Ma jirtaa hab lagu sooceliyo xogta Windows 10? "
Isticmaalayaasha badankoodu waxay leeyihiin khibrad aan fiicneyn oo leh sheyga Windows 10. Tan waxaa sida caadiga ah soo raaci doona arrimaha kale sida muraayadda buluugga ama madow ee dhimashada ama dib loo bilaabo dib u bilaabashada. Waqtigan xaadirka ah, waxa ugu muhiimsan waa xallinta dhibaatada iyo nidaamka dib ugu soo celinta xaalad caadi ah. Laakiin runtii way adag tahay dadka isticmaala kuwa yar yar ee kombiyuutarada. Haddii aadan awoodin inaad dayactirto Windows 10 ka dib shilka, waa inaad marka hore isku daydaa inaad dib u hesho xogtaada. Mana aha hawl fudud Xogta ka soo kabashada kombiyuutarka guuldaraystay . Laakiin ha ka welwelin! Halkan waxaan ku tusi doonaa sida loo helo xogta ka dib shil uu ka dhacay Windows 10 oo leh najab xogta xoog loo isticmaalo. Akhri akhriga, ka dibna waxaad raaci kartaa talaabada tabobarka talaabo.
Xogta dib u soo kabashada shil ka dhaca Windows 10
Xogta ka soo kabashada sheyga Windows 10 way fududahay markaad hayso fayl nuqul ah oo aad dib u soo celin karto xogtaada. Laakiin inta badan, ma haysid wax faylasha kayd ah oo la heli karo. Taasi waa marka faylka dib u soo kabashada EaseUS wuxuu ku siinayaa caawimo qiimo leh. Haddii ay dhacdo in kumbuyuutarku uu ku fashilmo inuu si caadi ah u bilaabo, waxaad u baahan tahay caawinaad Barnaamijka dib u soo kabashada xogta EaseUS oo leh taageero bilaabida guul ka soo kabashada xogta kadib markii shil uu ka dhacay Windows 10.
Si aad xogta uga heshid shilka Windows, raac talaabooyinkan:
Marka hore, soo qaado oo rakib saaro Easeus Macluumaadka Xog-celinta Macluumaadka EASTUS Winifay WinPE Edition ee kombiyuutarka shaqada.
Ka dibna waxaad abuurtaa diskka WinPE ee bootable ah ee barnaamijka dib u soo kabashada xogta EaseUS, kaas oo kaa caawin doona inaad u hesho macluumaadka ku saabsan darawalkaaga adag adigoon haysanin Windows.
1. Ku bilaw barnaamijka dib u soo kabashada xogta EaseUS ee kombiyuuterka socda.
2. Xulo CD / DVD ama USB drive iyo guji "Continue" si aad u abuurto disk cajalad leh.
Faahfaahinta si ay uga soo kabtaan xogta nidaamka hawlgalka oo guuldaraystay
Ku xir diskida WinPE-ga ee aad ku abuurtay kombiyuutarka nidaamka Windows-ga burburay, dib u cusbooneysii kombiyuutarka, iyo helitaanka BIOS si aad u bedesho taxanaha boot. Riix F2 markaad bilowdo PC-gaaga. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku maamulto software-ka soo-kabashada EaseUS iyo dib-u-helidda xogta adiga oo aan lahayn Windows.
1) Dooro diskka aad rabto in aad soo ceshato xogta dabadeedna riix batoonka "Scan". (Scan)
2) U oggolow in uu barnaamijku ku baaro wadada la xushay si loo raadiyo dhamaan faylasha iyo faylasha.
3) Horudhac iyo dooro faylasha aad rabto, guji badhanka "Recover" si aad ugu badbaadiso meel ammaan ah. Waxaad ka fiicnaan laheyd doorasho kala duwan si aad uga fogaato in macluumaadka la qoro.
CCM - Ma helayo emailka xaqiijinta - Talooyin
Ninkani wuxuu ka jawaabayaa dadka isaga weydiinaya haddii uu ka tagi lahaa xaaskiisa ay dabka ku dhufteen - SANTE PLUS MAG